Apple Inoburitsa Beta 2 yewatchOS 3.2 uye tvOS 10.2 yeVagadziri | Ndinobva mac
Apple inoburitsa beta 2 yewatchOS 3.2 uye tvOS 10.2 yevagadziri
Uyu Muvhuro masikati, shanduro nyowani dze beta dzemhando dzakasiyana dzeApple dzinoshanda dzinosvika uye semamwe mavhezheni apfuura mushure mekuwedzera shanduko dzakakosha mushanduro yekutanga, mune idzi shanduro dzechipiri gadziriso inogadzirisa uye yakagadziridzwa kugadzikana kwesisitimu kwaizoratidzwa.
Apple yakawedzera shanduko huru mukutanga beta shanduro yewatchOS 3.2 uye kwete yakawanda zvakadaro asi yeTVOS 10.2, saka panguva ino hatitarisiri kuwana nhau dzakasarudzika kunze kwekugadzirisa zvipuka mune beta vhezheni inonyora nhau dzayo, saka tichaona kana ichiratidza chero nhau kana kwete.
Zviri pachena Iyo yechipiri beta yeIOS 10.3 yevagadziri yakaburitswawo masikati ano uye ndinovimba mangwana inguva yekushanduka kwesisitimu yedu yekushandisa, macOS Sierra. Parizvino uye kana pasina nhau dzeminiti yekupedzisira, ivo vanogadzira vachasiiwa vasina nhasi, asi zviri chokwadi kuti vachazvimisikidza mangwana.
Apple zvakare ine chirongwa che beta chevashandisi vanoda kuvaedza pamakomputa avo (yeruzhinji beta) uye vasina account yepamutemo yekuvandudza, idzi shanduro dzinowanzoburitswa zuva rinotevera, mazuva maviri apfuura mushure mekutanga vhezheni yevagadziri, yei tichave takamirira nezvazvo zvakare. Kana iri nhau yemabheas aburitswa nhasi, kana paine imwe yakatanhamara inowoneka, tichaigovana mune ino imwe nyaya, asi zvinoita sekunge pane zvishoma kana hapana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Apple inoburitsa beta 2 yewatchOS 3.2 uye tvOS 10.2 yevagadziri
Apple inoenderera ichinanga mabhengi eAustralia ekudzivirira Apple Kubvumidzwa
Tim Cook achagamuchira kuzivikanwa kwakakosha kubva kuYunivhesiti yeGlasgow